I-Walton - Ifulethi lesimanje elihle e-Much Wenlock - I-Airbnb
I-Walton - Ifulethi lesimanje elihle e-Much Wenlock
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Doug
Ifulethi laseWalton lingelinye lamafulethi eWenlock Studios amadolobha amathathu azinze enkabeni yeMuch Wenlock. IWalton inekhishi/indawo yokuphumula enepulani evulekile enendlu yangasese ephansi, enganakwa ikamelo lokulala eline-en suite encane.
Leli fulethi linikeza konke umuntu angakufisa, okubandakanya ikhishi lesimanjemanje kanye nendawo yokuhlala enethezekile.
Okuhle kunakho konke ukuba sesikhungweni ungafinyelela kalula ezindlini zokulala ezinhle kakhulu ze-Much Wenlock, izindawo zokudlela kanye nezitolo ezizimele eziwubukhazikhazi.
Kuhle kubashadikazi abafuna impelasonto yothando
Wena noJulie uyazi ukuthi iSouth Shropshire iyindawo ekahle yokuphumula ngezindawo zokudlela ezinhle nezindawo ezithakazelisayo, ukuhamba okumangalisayo nokuhamba ngebhayisikili, kanye nezwe elikhuthaze u-A.E.Housman noMary Webb. Izitudiyo ze-Wenlock ziyisisekelo esihle esingahlola kuso noma isiphi isikhathi sonyaka, futhi besifuna ukudala indawo ethile lapho thina ngokwethu singathanda ukuhlala khona.
I am a retired butcher, who decided to get into property renovations & then branched out into holiday accommodation.Doug is married to Julie Lewis, they are joint owners of Wen…
Uzothunyelelwa i-imeyili yokufika lapho ubhukha, ezokunikeza ikhodi yokungena emasangweni kagesi, futhi ufinyelele nebhokisi lokhiye.